Igumbi ngasemlanjeni wentaba eBiałka Tatrzańska - I-Airbnb
Igumbi ngasemlanjeni wentaba eBiałka Tatrzańska
Białka Tatrzańska, małopolska, Poland
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguJadwiga
SiseBiałka Tatrzanska kwiNgingqi yasePoland, kufutshane neTatra Mountains. Eyona ndawo idumileyo yeKotelnica Bialczanska Ski Resort ikumgama weekhilomitha eziyi-147 ukusuka endlwini yethu. Sinamagumbi okuthi zava, atofotofo aneTV negumbi lokuhlambela labucala. Indawo yethu inendawo yokoja kunye nendawo yokudlala yabantwana kunye nekhitshi elisetyenziswa nangabanye abantu. I-WiFi yasimahla iyafumaneka kuyo yonke le ndlu ibe indawo yokupaka esimahla iyafumaneka kwisayithi.
Ibekwe eBiałka Tatrzanska, ikhilomitha eyi-1 ukusuka eGrapa Litwinka Ski Lift, iikhilomitha eziyi-115 ukusuka eKotelnica Bialczanska Ski Resort, ngoxa iBania thermal Baths ikwiikhilomitha eziyi-1.7 ukusuka kwipropati. Ukubuka intaba, umlambo okanye igadi kubonakala kumagumbi athile. Unokwenza izinto ezahlukahlukeneyo, ezifana nokutyibiliza ekhephini, ukuhamba ngebhayisekile kunye nokunyuka intaba. Esona sikhululo seenqwelo-moya sikufutshane yiKrakow - eBalice Airport, ekwiikhilomitha eziyi-81 ukusuka ePokoje Gościnne Pod Jaworem.
IBIAngerKA TATRZA ImperSKA yidolophana encinci enabemi abamalunga namawaka amabini, ekwindawo esemazantsi ePoland, ekumgama weekhilomitha eziyi-100 ukusuka eKraków kwaye ikude ngeekhilomitha eziyi-22 ukusuka eZakopane, edume ngeresort yayo ye-ski 'Kotelnica' kunye neepuli zemihla ngemihla ze-geothermal 'Terma Bania' kunye neAqua Park, iSpa Centre kunye nobumnandi obuninzi kumntu wonke. Kukho iipuli zangaphakathi nezangaphandle, izilayidi, iingxangxasi, iingxangxasi, i-jacuzzi kunye neebhari ezimbalwa.
-iindlela zokuhamba ngeenyawo (ezona zinde ziikhilomitha eziyi-4.5) eBialka Tatrzanska. Zonke iindledlana zibekwe phezulu kwiziko leKotelnica ski.
-iirayisi eziphakathi kwidolophana yaseBialka Tatrzanska (ngaphakathi nangaphandle) kunye neendawo zokutyibiliza emkhenkceni kunye nee-penguin ezikhethekileyo zabantwana.
Ukubethwa ngumoya kunye
nee-billiards kwiHotel Burkaty -ukukhwela imoto -ukuqesha ngebhayisekile -disco kunye neklabhu kwiHotel Bania -iivenkile zokutyela ezininzi
Umbuki zindwendwe ngu- Jadwiga
Ndifumaneka nanini na. Ngamanye amaxesha andikho kodwa ungandifowunela okanye undithumele umyalezo nanini na. Kwakhona intsapho yam ingakunceda :)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Białka Tatrzańska